बैङ्कबाट ऋण लिन चाहनुहुन्छ, कुन बैङ्क सस्तो पर्छ ? – Ranga Pati
2021, June 21, Monday
बैङ्कबाट ऋण लिन चाहनुहुन्छ, कुन बैङ्क सस्तो पर्छ ?
Posted on November 20, 2019 Author rangapati Comment(0)
तपाईं, घरजग्गा वा व्यवसाय आफ्नै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर पैसा छैन । यसकारण तपाईंलाई बैङ्कबाट ऋण चाहिएको छ । यदि हो भने एउटै बैङ्कमा मात्र भर नपर्नुस् । सर्वप्रथम बैङ्कबाट ऋण लिने मनसाय हो भने नेपालमा रहेका २८ वटै वाणिज्य बैङ्कको अहिलेको आधार दरमा तपाईंले नजर डुलाउनै पर्ने हुन्छ ।
बैङ्कहरूले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । विवरणअनुसार उनीहरूको आधार दर घटेको देखिएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा सरकारी बैङ्कबाहेक अन्य बैङ्कको आधार दर घटेको छ । पब्लिक बैङ्कका एनएमबीको आधारदर बढेको छ ।
आधारदर कम हुनु भनेको सामान्यतया ऋणको ब्याजदर घट्नु हो । विगतका दिनमा निकै सस्तो कर्जा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको आधार दर बढेको छ । यसको आधार दर ६.६० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी लगानीको बैङ्क भए पनि कृषि विकास बैङ्कको आधार दर दोहोरो अङ्कमा देखिएको छ । बैङ्कको आधार दर ३.८५ प्रतिशतले बढेर १०.१८ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाल बैङ्कको पनि ०.३२ प्रतिशतले आधार दर बढेको छ ।
बैङ्कहरूले कृषिमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउँछन् भने व्यावसायकि कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा महँगो सिभिल र सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क
गत वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको आधारदर बढे पनि अरू बैङ्कको तुलनामा अझै पनि ऋण लिन यही बैङ्कमा सस्तो पर्ने देखिएको छ । एकल अङ्कको आधार दर भएको आरबीबी ऋणका लागि सस्तो पर्ने देखिन्छ । सिभिल बैङ्क भने ऋणका लागि सबैभन्दा महँगो पर्ने उसको आधार दरले पुष्टि गर्छ । अहिले उसको आधार दर ११.११ प्रतिशत छ । १३ वाणिज्य बैङ्कको आधार दर दोहोरो अङ्कको छ ।
कुन बैङ्कको आधारदरर कति ?
राष्ट्रवादी अभियन्ता नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्रियताका लागि वि’प्लव नेकपा र नेपाली सेना मिलेर ल’ड्नुपर्ने बेला आयो’ (भिडियो)
Posted on December 1, 2019 December 1, 2019 Author rangapati
स्वतन्त्र राष्टिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले भारतका विरुद्ध वि’प्लव नेकपा र नेपाली से’ना मिलेर ल’ड्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । नेपालले प्रधानमन्त्री ओली विदेश शक्तिका दलाल भएको भन्दैं नेपालको नयाँ शक्ति वि’प्लव नेकपा र नेपाली सेना देशभक्त हो भने मिलेर ल’ड्नु पर्ने धारणा राखे । जनपाटी अनलाइन टिभीसँगको कुराकानीमा नेपालले ओलीले नेपाली सेना विघटन […]
टिप्स नयाँ अनुहार समाचार स्वास्थ्य
ह्याप्पी बर्थडे रुपा !!
Posted on October 19, 2019 October 19, 2019 Author rangapati
शनिबार रुपा वलीको जन्म दिन परेको छ ! कृष्ण ओलीले आफ्नी जिबन संगिनी रुपा वलीलाई जन्म दिनको शुभकामना दिएका छन् ! रुपाले आफ्नो जन्म उत्सव मनाउदै, शुभकामना दिनेहरुप्रती धन्यवाद दिएकी छिन ! रुपाले आफ्नो फेसबुकमा भनेकी छिन, ‘जसले मलाई माया गरि जन्म दिनको शुभकामना दिनु भयो यहाँहरुलाई हृदय देखि धन्यबाद छ ! यो बर्ष […]
मङ्सिर ४ गते बुधबार, (नोभेम्बर २० तारिख)को राशिअनुसार तपाईंको भाग्य हेर्नुहोस